Jamaal Cali Xuseen Oo Madaxweyne Muuse Biixi Ugu Baaqay Inaanau Aqbalin Dayn Xad Dhaaf Ah Oo Uu La Wareego | Baligubadlemedia.com
Jamaal Cali Xuseen Oo Madaxweyne Muuse Biixi Ugu Baaqay Inaanau Aqbalin Dayn Xad Dhaaf Ah Oo Uu La Wareego
dad uun baa u gelaaya Oo la talinaaya, weliba waxa Ugu tallooyin fiican kuwa ku dhex jiray xukunka dawladnimo oo qaar ka mid ah weliba lagu dhaliilaayey shaqooyinkii ay hore u soo qabteen iyagoo ay hore Bulshadu farta ugu fiiqday kuna haysatay wax is daba marin iyo musuqmaasuq. Haddaba Madaxweyne la doortay Muuse Biixi ayaa sidii Wadaadkii naftiisa ku leh; ” waar waa maxay Jinkan xariifka ahi ee Quraankii dudubinayaa” ileyn waa kuwanoo iyagiibaaba ku dhega barjeeyey talooyin wax ku ool ah Madaxweynahii hadda waa kuwii laga cabanaayey. Odhan maayo qof kastoo dawlad hore ka soo shaqeeyey waa lama qaatan, odhan maayana dadka imika xukuumadan la badelaayo ka tirsani waa lama qaataan. Dad wanaagsani waa ku jiraane kolay Madaxweynaha la doortay isagaaba iiga aqoon badan dadka badidooda. Laakiin fariinta Ugu muhiimsani waxay tahay oo isugu jirtaa laba qodob